IKhemistry Glossary Inkcazo ye-Ionization Energy
Amandla e-ionisation ngamandla adingekayo ukususa i- electron kwi- athomu ye- gase okanye ion . Amandla okuqala okanye okuqala e-ionisation okanye i-i ye-athomu okanye i- molecule yindlela efunekayo yokususa i- mole enye yamathethoni kwi-mole enye yamatomu okanye i-ioni.
Unokucinga nge-ionisation energy njengomlinganiselo wobunzima bokususa i-electron okanye amandla apho i-electron iboshwe. Ukuphakama kwamandla e-ionization, kunzima kakhulu ukususa i-electron.
Ngako oko, amandla e-ionization ekhombisi yokusebenza. I-energy ionization ibalulekile kuba ingasetyenziselwa ukunceda ukuqikelela ubungqina beebhondi zamakhemikhali.
Eyaziwayo njenge: ionization, IE, IP, ΔH °
Amanyathelo : I-ionization yamandla ibikwa kwiiyunithi ze kilojoule nganye kwi-mole (kJ / mol) okanye i-electron volts (eV).
Ionization Yamandla kwiTable Table
Ionization, kunye nebala le-athomu kunye ne-ionic, i-electronegativity, i-electron ibumbane kunye ne-metallicity, ilandele umgangatho kwitheyibhile yenkcazelo yezinto.
Amandla e-ionization ngokunyuka akhuphuka ukusuka kwesobunxele ukuya ngasekunene kwixesha lesigaba (umgca). Oku kungenxa yokuba irejista ye-athomu iyancipha ukuhamba ngaphaya kwexesha, ngoko kukho ukukhanga okukhulu phakathi kwama-electron axhatshazwayo kunye ne-nucleus ephathekayo. Ionization yisexabiso layo elincinci kwi-alkali yentsimbi kwicala lasekhohlo letafile kunye nomlinganiselo ophezulu kwigesi efanelekileyo kwinqanaba elide lexesha. Igesi efanelekileyo igobolence egciniweyo egciniweyo, ngoko inqanda ukususwa kwe-electron.
Ionization iyancipha ukuhamba phezulu ukuya phezulu phantsi kweqela lezinto (ikholomu). Oku kungenxa yokuba inombolo yenqununu yecandelo le-electron engaphezulu iyakhuphuka ehamba iqela. Kukho iiprothoni ezingaphezulu kwiinqutyana ezihamba phantsi kweqela (icala elihle kakhulu), kodwa umphumo ukutsala kwiigobolondo ze-electron, ezenza zibe zincinci kwaye zihlolisise i-electrons zangaphandle ukusuka kummandla okhangayo wenucleus. Iinqwelo ze-electron ezongezelelweyo zinyuka zihamba ngaphantsi kweqela, ngoko i-electron engaphandle iyanqumla ukusuka kwi-nucleus.
Okokuqala, Okwesibini, kunye neNkxaso ye-Ionization
Amandla adingekayo ukususa i-elektronni ye-valence yangaphandle kwi-athomu engathathi hlangothi yimbane yokuqala ye-ionization. I-energy ye-ionisation yesibini iyadingeka ukususa i-elektroni elandelayo, njalo njalo. I-energy ye-ionization yesibini ihlala iphakamileyo kuneyokuqala kwamandla e-ionization. Thatha, umzekelo, i-athomu yensimbi ye-alkali. Ukususa i-electron yokuqala kubonakala kulula kuba ilahleko layo yenza i-atom isigxina se-electron shell. Ukususa i-electron yesibini kubandakanya i shells entsha ye-electron esondelene kwaye iboshwe ngokuqinile kwi-nucleus ye-athomu.
Umbane wokuqala we-ionisation we-hydrogen unokumelwa ngolu hlobo lulandelayo:
Δ H ° = -1312.0 kJ / mol
Ukungaxhomeki kwi-Ionization Energy Trend
Ukuba ukhangele ityati ye-ionization yamandla okuqala, ukungafani kwamabini kubonakala ngokucacileyo. Amandla okuqala e-ionon ye-boron ingaphantsi kuneleyo ye-beryllium kwaye i-ionisation yokuqala yamandla oksijini ingaphantsi kweso nitrogen.
Isizathu sokungahambelani ngenxa yendlela yokucwangcisa i-electron yale micimbi kunye nolawulo lwe-Hund. I-beryllium, i-electron yokuqala ye-ioni ivela kwi-2 ye-orbital, nangona ionisation ye-boron iquka i-2 ye-elektron.
I-nitrogen kunye ne-oksijeni, i-electron ivela kwi-2 p , kodwa i-spin ifanayo nayo yonke i-2 p i- nitrogen electron, ngelixa kukho i-electron edibeneyo kwenye ye-2 p i-orbitals ye-oxygen.
Yintoni i-IUPAC kunye Nokwenza Kanjani?
Ulungelelaniso lweBond Bond
Inkcazo engaphezulu kweNkqubo kunye noMzekelo
I-Hydrolysis Inkcazo kunye nemizekelo
Yenza i-Shadow ibambelele kwiNqununu
Iimpawu zoMzimba kwiMilingo
Indlela Yokunquma Ngokwenene Ulwabiwo loRhulumente
Kubaluleke kangakanani Ingxelo yakho ye-GMAT?
I-Creative Journal Iingxoxo ezibandakanya iindlela ezihlukeneyo
Iindawo ezininzi zeNtshontsho zeHlabathi